Daawo Sawirada Riyad Mahrez oo sirasmi ah ugu biirey Manchester City | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Daawo Sawirada Riyad Mahrez oo sirasmi ah ugu biirey Manchester City
(11-7-2018) Kooxda Manchester City ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dhamaystirtay xidiga xulka qaranka Algeria ee Riyad Mahrez kaas oo ay kala soo saxiixatay kooxda Liecester City. Bishii January Man City ayaa ku fashilantay in ay Foxes heshiis kala gaadho qiimaha Riyad Mahrez taas oo sabab u noqotay in heshiiskii xidigani markaas ku iman lahaa Etihad Stadium uu burburay.
Laakiin Pep Guardiola ayaan ka quusan in uu soo xero galiyo Rihad Mahrez waxayna hadda Man City si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay xidiga ree Algeria la soo wareegtay. Man City ayaa Rihad Mahrez ka soo bixisay 60 milyan euros isaga oo si toos ah ugu biiri doono mashruuca Guardiola uu haddaba ugu soo guulaystay koobka Premier league.
Riyad Mahrez ayaa noqday xidigii taariikhda Manchester City ee suuqa kala iibsiga ugu qaalisanaa wuxuuna rekoodhkan kala wareegay Aymeric Laporte kaas oo sanadkii hore City ugu soo biiray 57 milyan gini halka Mahrez uu hadda Etihad Stadium ku soo gaadhay 60 milyan gini.
Markii uu qalinka ku duugay qandaraas waqti dheer ah ayuu Mahrez dareenkiisa ka hadlay isaga oo waliba si gaar ah u xusay Guardiola iyo hanaanka ciyaareed ee kooxdiisa wuxuuna yidhi: ” Waxaan ku faraxsanahay in aan City ku soo biiray, koox kubbad fiican ku hoos ciyaaraysa Pep Guardiola”.
” In aan meel fog ka soo daawanayay farxad ayay ii ahayd, Guardiola waxaa ka go’an in uu ku ciyaaro kubbada cagta oo weerar ah taas oo aniga aad iigu haboon, bandhigii City ee xili ciyaareedkii hore cajiib ayuu ahaa.Waxay dib u qeexayaan ciyaarta England waxaanan doonayaa in aan qayb ka ahaado”.
Agaasimaha ciyaaraha kooxda Man City ee Begiristain oo heshiiska Riyad Mahrez door wayn ku lahaa ayaa isna dareenkiisa ka hadlay wuxuuna yidhi: “Riyad waa ciyaartoy hibo wayn leh, waxa uu garaacaa difaacyada wuxuuna sameeyaa banaan. Dhawrkii sanadood ee la soo dhaafay waxa uu ahaa mid ka mid ah ciyaartoyda Premier Leauge ugu xiisaha badan”.
Begiristain ayaa sheegay in imaatinka Rihad Mahrez ee kooxdiisa Manchester City uu soo kordhin doono tayo dhinaca weerarka ah wuxuuna yidhi: ” Waxaanu hubnaa in kooxdayada uu ku soo kordhin doono tayo dheeraad ah oo weerarka ah”.